स्वास्थ्यका लागि प्याज लाभदायक – Everest Dainik
स्वास्थ्यका लागि प्याज लाभदायक
२०७४, २५ आश्विन बुधबार
असोज २५ । हामीले दैनिकजसो तरकारी पकाउँदा प्याजको पनि प्रयोग अत्यधिक प्रयोगमा ल्याएका हुन्छौं । तर, कतिलाई यो कुराको जानकारी छैन कि वास्तवमा प्याज हामी किन खाने गर्छौ । धेरैले प्याजको स्वादको लागि प्रयोग गर्ने गर्छौ । तर, वास्तवमा यो सत्य होइन । प्याज हामीले स्वादलाई भन्दा बढी स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी खाने गर्दछौ । प्याजले नेचुरल ब्लडको थिनर गर्नेमात्र होइन, यसको सेवनले ब्लड जम्न नसकेको र इम्युनिटी पावर बढाउने कार्य गर्दछ साथै यसले रुघाखोकी, ज्वरोलाई पनि ठीक पार्ने गर्दछ ।
स्वस्थ स्वास्थ्यका लागि बिर्सेर यी खानेकुरा एकसाथ नखानुहोस्-
मधुमेह र रक्तचापको लागि लाभदायक
प्याजमा एक प्रकारको क्रोमियम पाउने हुनाले जसले सुगरको नियन्त्रण गर्नुको साथै रगत संचालनलाई पनि ठीक गर्ने कार्य गर्दछ । यसमा हाम्रो मांशपेशी र शरीरमा थोरै थोरै गरेर ग्लुकोज पाउने गरेको हुन्छ । जानकारी लागि यो कुरा थाहा पाउँदा तपाईहरुलाई अचम्म लाग्न सक्छ कि दैनिकजसो प्रयोग गर्ने सागसब्जीको प्रयोग गर्दा धेरैजसो क्रोमियम कदापि पाउने गर्दैन । प्याजको खानु पनि तपाईको शरीरको लागि फाइदाजनक नै हुन्छ । प्याजले शरीरमा रगत जम्ने समस्यालाई रोक्ने कार्य गर्दछ । यसले गर्दा रक्तचाप तथा मधुमेहबाट सधैं बचाइराख्न सहयोग गर्दछ ।
साबुदाना खाँदा हुने फाइदाहरु-
साबुदाना र प्याज एकसाथ खाँदा हुने बेफाइदा
यदि तपाईको शरीरको कुनै पनि अंगमा चोट लागी रगत बग्न थालेमा प्याजको रस लगाएमा दुखाई कम भई रगत बग्न छोड्छ । नाकबाट रगत आउने गरेमा प्याजको रस दुई–तीन थोपा हाल्ने गरेमा पनि रगत आउन बन्द हुन जान्छ । काँचो प्याज खाने गरेमा गर्मी मौसममा लाग्ने लू (तातो हावा) बाट बच्न सकिन्छ । यदि कसैलाई लू लागिहालेमा प्यासको रस पिउने गरेमा वा मालिस गरेमा निकै आराम मिल्छ । आफ्नो एक टुक्रा प्याज बोकेर हिँडेर गरेमा पनि यो लू रोग लाग्ने सम्भावना धेरै कम हुन जान्छ । घुँडाको दुखाईले सताइरहेको छ भने पनि तेलमा प्याजको रस मिलाएर लगाउनाले दुखाई कम हुन थाल्दछ ।
बिहान सबेरै जिराको पानी पिउनाले हुने फाइदा
चिसो (खोकी, ज्वरो, पेट दुखाई र एनिमियाँमा यो एकदमै लाभदायक
बराबर मात्रामा प्याजको रस र मह मिलाएर खानाले पनि चिसोबाट लाग्ने रोग (रुघा, खोकी, ज्वरो) आदिबाट पनि बच्न सकिन्छ । काँचो प्याज खानाले ग्यास्ट्रिक सिंड्रोम र कब्जियतमा फाइदा हुन जान्छ । प्याजमा भएको एकप्रकारको फाइवर भएका कारण नै यसले पेटको सफा राख्ने काम गर्दछ ।
अनुहार र कपालको लागि फाइदाजनक
प्याज अनुहार र कपालको लागि धेरै गुणकारी रहेको छ । जैतुनको तेलमा प्याजको रस मिलाएर अनुहारमा लगाउने गरेमा अनुहारलाई सफा राख्ने काम गर्दछ । कपाल झर्ने समस्या छ भने पनि प्याजको रस लगाएर मालिश गर्नाले कपाल झर्ने र चायाँ पर्ने कम हुन थाल्छ ।
घरमा तुलसी रोप्नाले हुने फाइदा
अनिन्द्रा, टाउको र दाँतको दुखाईमा लाभदायक
कसैलाई निन्दा नलाग्ने समस्या छ भने प्याज खाने गरेमा अवश्य फाइदा हुन थाल्छ । टाउको र दाँतको दुखाई बढेमा यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ । तीन चम्चा पानीमा एक चम्चा प्याजको रस हालेर पिउने गर्नाले केही आराम मिल्छ ।
महिनावारी हुँदा आराम हुने
महिलाको महिनावारी हुने बेलामा हुने समस्यामा निजात पानीमा प्याज धेरै फाइदाजनक हुन्छ । महिनावारी शुरु हुनु पहिले काँचो प्याज खानाले पनि फाइदा मिल्छ ।
मापसे जाँच्ने नयाँ प्रविधि
व्यापारी पोदारको घरमा विशेष समितिको छापा
मासुका लागि कुकुर नमार्न कोरियाली अदालतको आदेश
अब अमेरिकी बस्तुमा युरोपभर अतिरिक्त कर लाग्ने
‘जय भोले’को ‘उम्लियो भने पोखिन्छ’ गीत युट्युबमा सावजनिक (भिडियोसहित)
चिरफारः आलोचना शारदा अधिकारीको, निशानामा प्रचण्ड !
लोग्ने र स्वास्नीबीच यो रमाइलो चुट्किला
नेकपाको बैठक : भिम रावल र योगेश भट्टराईको चर्को असन्तुष्टि
वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डा. उपेन्द्र देवकोटाको निधन
रवि लामिछानेलाई ३ वर्ष कैदसहित ३० हजार जरिवाना हुनसक्ने !
नेमारको जीवनः स्टार्डम, सम्पत्ति र सेक्स